Mpisolovava fisoratana anarana Mpiara-miasa FIDULINK Global Business Network
MITADIAVO AZO AZY ATAO DIDINIKA
MITADIAVO FIKAMBANANA VOLANA
Midira ao amin'ny mpiray fikambanana ara-dalàna ao amin'ny vavahadin'i FIDULINK dia ny fahazoana fangatahana serivisy mivantana avy amin'ny lampihazo FIDULINK. Mahazoa firaketana, fangatahana, consultations sy ny maro hafa.
Koa ataovy lalàna FIDULINK dia mahazo fangatahana amin'ny kitapo vitsivitsy. Fisoratana anarana maimaim-poana mandritra ny minitra 5. Fiofanana momba ny sata kalitao, serivisy, fahaiza-manao amin'ny FIDULINK atolotra (ity dingana ity dia mitaky ny 45 minitra).
MAHAFINARITRA FIAINANA VOLA?
Mpisolovava mahaleo tena na orinasan-dalàna, ny hidiranao amin'ny FIDU ihany no tokony hataonaoLINK
Hanara-maso ny raharaham-barotra sy ny lahatahiry avy amin'ny habaka MY OFFICE , fitaovana tena izy hanatanterahana ny iraka ara-dalàna sy ny serivisy rehetra misy.
Tonga mpisolovava iray FIDULINK manatevin-daharana vavahadin'ny serivisy ara-dalàna manerantany izy io. Miaraka amin'ny fisian'ny firenena maherin'ny 150 manerantany MY OFFICE dia manolotra anao fahafahana mandray ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.